Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Reincarnation momba ny angano baseball Babe Ruth | Red Sox Slugger David Ortiz: Talenta fiainana taloha sy fitoviana ara-batana - fikarohana Reincarnation
Raharaha Reincarnation momba ny angano baseball Babe Ruth | David Ortiz mena: Sox Slugger Mena: Ny talenta fiainana taloha sy ny fitoviana ara-batana
Tsindrio ny sary mankany Enlarge
David Ortiz, legend an'ny baseball, ny Reincarnation an'i Babe Ruth, dia voatifitra
Taona maro lasa izay, David Ortiz no fantatra fa ny reincarnation de Babe Ruth. David Ortiz dia tao amin'ny vaovao tamin'ny taona 2019 noho ny fitifirana azy ary saika novonoina tany amin'ny tanindrazany, Dominikana, tamin'ny tranga tsy fantatra. Ny solonanarana nataon'i David dia "Big Papi", mitovy amin'ny anaram-bosotra an'i Ruth, "The Bambino."
Babe Ruth dia teraka tamin'ny 1895. Izy dia nanomboka ny asany tamin'ny Boston Red Sox ary lasa mahery fo amin'ny fihazakazan'ny baseball amerikana. Maty tao amin'ny 1948 i Rota.
Babe Ruth Miverina amin'ny ekipan'ny baseball mena any Boston amin'ny alàlan'ny Reincarnation
David Ortiz dia teraka tao 1975 tany amin'ny Repoblika Dominikanina. Toa an'i Ruth dia malaza amin'ny fahaizany mikapoka baseballs teo ivelan'ny zaridainan'ny baolina. David Ortiz dia mpilalao baseball All-Star, toa an'i Ruth. Mahaliana fa i Ortiz dia milalao ho an'ny Boston Red Sox, toa an'i Babe Ruth ihany.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitovian-javatra eo amin'ny endri-pitadiavanan'i Babe Ruth sy David Ortiz.
Talenta fiainana taloha sy fitondran-tena ary fahaiza-manao: Ny fahaiza-manaon'ny baseball an-trano avy amin'i Babe Ruth dia namerina tao amin'ny fiainan'i David Ortiz. Na i Ruth sy Ortiz dia samy nilalao ho an'ny Boston Red Sox.
Fanovana ny maha-olona sy ny fiaviany: Babe Ruth dia Caucasian teraka tany Baltimore, Maryland, Etazonia. David Ortiz, Hispanic, dia teraka tao amin'ny Repoblika Dominikanin'ny Nosy Caribbean. Ny fahatakarana fa ny fanahy dia mety ho teraka ao amin'ny firenena, kolontsaina, finoana ary fiaviana samy hafa manomboka amin'ny androm-piainany mankany amin'ny iray hafa dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo.